XEERARKA IYO SIFOOYINKA DARYEELKA EE TSIPERUS GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Daryeelka tsiperus guriga oo leh aqoon
Tsiperus (syt, sytnik) waa caleemo ballaaran oo dhirta cagaarka ah ee qoyska Sedgeoo ay ku jiraan ilaa 5,000 nooc oo adduunka ah. Sedex ayaa inta badan laga helaa meelaha qoyan sida dhulalka qoyan. Diirad gaar ah ayaa la siiyaa dhirta kuwaas oo ku xiran kaalintooda muhiimka ah ee deegaanka qoyaanka hawada. Xaaladaha dhismaha xiran, waxay bilaabeen inay koraan min 80kii qarnigii la soo dhaafay. Xiiperus ubaxa waxaa jecel beeraleyda ubaxa badan oo ay ugu wacan tahay fududeynteeda iyo xogta dheelitirka wanaagsan. Geedkan aan caadi ahayn wuxuu awood u leeyahay qurxinta gudaha casriga ah. Muuqaalka ugu muuqashada badanaa waa cagaar dhalaalaya, midab, ubax, ubax iyo caleemo-qaabeeya.
Xaaladaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'ziperus'
Xawaaraha xayawaanka guriga waa sahlan yahay. Waxay si fiican ugu habboon tahay jawiga cimilada. Noocyada ugu caansan ee soo socda ayaa koray guriga: C. papyrus, C. Caleen-perennial, C. Zumula, C. Helfer, C. faafidda.
Tsiperus u baahan yahay iftiin dhalaalaya oo iftiiminaya. Sidaa darteed, meesha ugu fiican ee beerashadooda waa daaqadaha ballaaran oo leh galaan galbeed ama dhinaca bari. Haddii daaqadaha ay soo wajahaan koonfur, isku day inaad sameyso iftiin baaxad leh geedka. Shooga ayaa looga baahan yahay oo kaliya maalmaha xagaaga kulul. Si aad u ilaaliso caleemaha dhirta laga bilaabo gubashada, xagaaga kulul waxaad u baahan tahay inaad ka qaaddid dheriga daaqada.
Xilliga jiilaalka, dhirta waxay u baahan tahay iftiin dheeraad ah. ilaha iftiinka iftiinka (nalalka dhaadheer). Waa in la bixiyaa 15 saacadood maalintii.
Sitovnik waxaa lagu kori karaa xaalado yar-yar. Si kastaba ha noqotee, meelo mugdi ah, korriin iyo horumar ayaa la hakiyey.
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah magaalooyinka ayaa og waa maxay saiperus. Dhab ahaantii, Tani waa isla papyrus, iyo magaca "tsiperus" waxay ka timaadaa luqada Giriigga oo la turjumay macnaheedu waa sedge caadi ah. Masar hore, geedka ayaa loo isticmaalaa inuu sameeyo warqad. Waxaan dhihi karnaa in falkani uu noqday saldhigga dhaqanka casriga ah. Ilaa hadda, waraaq qaali ah laga sameeyay papyrus iyadoo la isticmaalayo farsamooyinka asalka ah. Iyo koonfurta Afrika, rhizomes iyo jirridda warshadda ayaa la cunaa. Goobaha dhirta waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo qalabka dhismaha.
Heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka waa xadka laga bilaabo + 14 ° S ilaa +22 ° S. Guga, dhirta ayaa raaxo leh qol leh heerkul ah + 18 ° C ilaa + 22 ° C. Si caleemaha sopovnik loo siiyo "neefta hawo nadiif ah" inta lagu jiro xilliga diirimaadka, waxaa lagula talinayaa in dheriga dibedda laga saaro.
Xagaaga, waxaa lagu talinayaa in dhererka loo wareejiyo aag hawo wanaagsan leh. Xilliga jiilaalka, isku day in aad siisid dhirtaada gudaha ah leh heerkulkuna ka yaraato + 16 ° S ilaa +19 ° C. Xilliga qaboobaha, heerkulku waa inuu hoos u dhaco +12 ° S. Sidoo kale, isku day in aad qolka ku qalajiso marar badan.
Syt - dhirta oo dhan. Waa sahlan tahay in lagu daryeelo gudaha gudaha: ubaxa waa mid aad u adag oo aan leexan karin. Si isku mid ah ayaa loo horumariyaa sanadka oo dhan, sidaas darteed xeerarka ilaalinta tsiperus ee cimilada diiran iyo qabowgu waa mid isku mid ah.
Tsiperus wuxuu u baahan yahay waraabin badan. Dheriga leh ubax waxaa lagula talinayaa in lagu dhejiyo dhoobo dhaadheer oo qoyan. Inta lagu jiro kobaca firfircoonida, waa in diirada la saaro biyaha. Xilliga xagaaga, taraamku waa inuu had iyo jeer ka buuxiyaa biyo.
Xilliga jiilaalka, waxaa lagula talinayaa in la daadiyo dareeraha laga soo bilaabo waraabinta kadib. Intaa waxaa dheer, caleemaha dheer ee tsiperus u baahan u buufinta joogtada ah. Biyaha diirran ee kulul waxaa badanaa loo isticmaalaa ujeedadaas. Qabow, buufinta waa in la jaraa, waxaana lagula talinayaa in dhererka laga fogeeyo bateriga kulul.
Guryaha noocan oo kale ah sida kicinta, spathiphyllum, primrose, nephrolepis, coleus waxay u baahan tahay waraabin badan.
Tsiperus - warshad qoyan-jecel. Si aad u ilaaliso qoyaanka ugu wanaagsan ee aqalka, waa in la isticmaalo qoyaan gaar ah. Habraac wax ku ool ah waa Buufin badan oo caleemo ah dhirta laga bilaabo sprayer, lagu qabto xilli diiran.
Si loo helo dayactir lagu guuleysto iyo soo saarida xayawaanka saxda ah waa muhiim. Sida bacriminta ku habboon macdanta caadiga ah ama bacriminta organic, oo la badiyay nitrogen. Isticmaalka la isticmaalo ee dhaymo qallalan iyo qalalan. Bannaanka xirfad leh ma ku talinayaan quudinta si ay u quudiyaan sanadka oo dhan. Bacriminta ayaa si wanaagsan loo dalbadaa mar 2 ama 3 asbuuc oo ah xilliga diirimaadka (laga billaabo horraanta gu'ga ilaa deyrtii hore).
Dhibaatooyinka suurtagalka leh ee sii kordhaya: xakamaynta cayayaanka iyo cudurrada
Cyperus wuxuu leeyahay difaac wanaagsan, waxaana uu ku filan yahay difaaca cudurada iyo cayayaanka. Dhibaatooyinka badanaa waxay ku dhacaan daryeel caafimaad aan habooneyn. Haddii aad aragto in caleemaha tsiperus huruud noqdaan, isla markiiba waxaad ogaataa waxa la sameeyo kiiskan. Asal ahaan, talooyinka iyo geesaha caleemaha waxay noqdaan huruud iyo hurdaan marka dhirta ay dareemayso la'aanta qoyaanka ee ciidda. Ka hortagga wuxuu noqon doonaa mid joogto ah oo habboon oo waraabiyo.
Haddii aad dareentid in caatadu ay si tartiib ah u koreyso - geedka ayaa la kulma yaraanta nafaqada. Iyada oo iftiiminta khaldan, badanaa ma muuqato casriga cusub. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad kordho kulaylinta iftiinka.
Waa muhiim! Haddii aad horey u aragtay calaamadaha cudurka, isku hagaajinta waraabka, iftiinka iyo quudinta gurigaaga beeraha organic xayawaanka beeraha ama macdanta.
Cayayaanka loo yaqaan 'tsiperus' waa caarada caarada. Cayayaanka ayaa laga yaabaa inay muuqdaan haddii hawada qolka uu yahay mid qalalan. Marka lagu guul dareysto calaamadda caleemaha cad ayaa muuqata. Si loola dagaallamo cayayaanka, tirtir caleemaha iyo cawska geedka leh daawooyinka anti-bararka.
Mararka qaarkood Cyperus wuxuu weerari karaa boodboodka, scytworm, whitefly iyo mealybug. Haddii cayayaanka waqtigooda la ogaado oo ay qaataan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, dhirta waa la daaweyn karaa. Xalka saabuunta ama xal cayayaanka ayaa faa'iido leh sida ilaalinta cayayaanka halista ah. Qaybahaas waxaa lagu baaraandegaa afkoda iyo caleemaha qulqulka.
Cyperus ayaa si fiican u koraya substrate iftiin leh ifilada daciif ah. Caarilka for tsiperus waxaa loo diyaarin karaa si madaxbannaan ciidda beerta, peat, ciid iyo humus. Si looga hortago socodka biyaha, waxaad u baahan tahay inaad abaabiso dheecaan lagu kalsoonaan karo.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa biyo-yare gaar ah. Polymer-ka wuxuu si fiican u nuugaa, wuxuuna ku jiraa qoyaan, waxana kale oo ku jira bacrimin oo faa'iido u leh beeridda. Si kastaba ha noqotee, walxaha qalinka ah lama barbar dhigi karo qaybaha dabiiciga ah.
Daryeelka habboon, cagaarshadu si deg deg ah ayey u kobcisaa, markaa warshadu waxay u baahan tahay inay qaadato awood sare. Si kastaba ha noqotee, dherer ballaaran oo dhaadheer leh ma shaqeyn doono, maadaama dhirta ay bilaabi doonto in ay siiso ilo badan oo loogu talagalay koritaanka nidaamka xididka.
Waa muhiim! Marka beeritaanka tsiperus ee dheecaanka taangiyada cusub ma ahan lagama maarmaan in la dhigo. Tani waa farqiga ugu wayn ee ka soo kabashada dhirta kale ee gudaha.
Marka xigta, tixgeli sida loo bedeli karo xayawaanka loo yaqaan 'tsiperus' ee xaaladaha qolka. Ubax dhalinyaro ah ayaa la siin karaa sannad walba. Qalabka laf-dhabarka ee dadka waaweyn sida loogu baahan yahay. Ubaxa waxaa si taxadar leh looga saaraa dheriga, iyo transplanting waxaa lagu fuliyaa iyada oo aan dhamaystirneyn ka saarista koomaada dhulka.
Xakamaynta dhirta waa in yar la jaro si ay u ruxaan substrate hore. Haddii xididdadu si xun u waxyeeloobaan, waa inaad si taxadar leh uga saartaa xididdada aan la isticmaali Karin, sidoo kale nadiifinta xuduudaha hore ee ciidda hore.
Sitovnik soo saari dhowr siyaabood oo caadi ah: abuur, gooyn iyo rosettes. Soo saarista tsiperus by koraya abuur ah waxaa loo tixgeliyaa in ay ahaato nidaam hawleed iyo waqti dheer, halka habka ugu wanaagsan ee la soo koobay isticmaalaya guntooda.
Daabacaadda abuurku had iyo jeer ma hubin natiijada in beeralayda ubaxu filanayaan. Marka la eego kala duwanaanta abuurka, sifooyinka geedka hooyada badanaa looma dhawro nidaamka syti Waxaad isku dayi kartaa inaad ku koriso xayawaanka ka soo abuurka ah, laakiin ka hor intaan la beeri, waa inaad soo saarataa qalabka lagama maarmaanka ah. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad iibsato miraha geedka cusub.
Marka xigta, diyaariso weelka daloolka daloolka. Seeds waxaa lagu beeray walax qoyan oo qoyan (hal walbaa wuxuu noqon doonaa mid ku haboon inta lagu jiro isu tallaalidda). Caadiyan, ciid, peat iyo xaashida dhulka ayaa loo isticmaalaa sida substrate. Substrate diyaar ah ayaa laga heli karaa dukaamada khaaska ah. Daadi miraha dusha sare iyo si tartiib ah hoos ugu riix alwaaxa. Ku dabool dharka dhalada ama ku duub baal balaastig ah. At heerkul ah +18 ° C iyo hubinta waraabin fara badan oo soo noqnoqda, sprouts ugu horeysa ayaa dhawaan u muuqan doona. Marka geedo soo jiidan oo aad u xoog badan, waxay ku foorarsadaan oo ku beddelaan dheriyo yar yar (saddexda caleemoodba). Habkan waxaa loo isticmaalaa wakhti kasta oo sanadka ah.
Dareerista dhirta ee tsiperus waxaa lagu fuliyaa by faafin warshadda. nacas gooynta. Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo kala qaybiyo baadiyaha, jarida gooynta mindi fiiqan. Caleemaha dhintay waa la kala saaraa haddii ay macquul tahay. Qayb kasta, ka tag 5 sikometer oo caleemo ah.
Dalladaha cusub waxay ku wareegaan biyaha ama guntooda ciid qoyan. Ka dib qiyaastii laba toddobaad, xididdada cad waxay u muuqdaan saldhigga caleemaha. Tani waa calaamad muujinaysa in titus uu diyaar u yahay inuu dib u soo celiyo. Muddo yar gudahood, caleemaha cagaaran dhalinyaro dhalatey on dusha ciidda.
Guryo badan oo badan ayaa soo saara by gooyn, oo ay ku jiraan hawada hawada, weigela, cacti, monstera, poinsettia, kolery, dieffenbachia, irbadaha, geranium.
Iyo, ugu dambeyntii, tixgeli sida loo dhufto roodhiga tsiperus. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay gooyaa rosettes ee caleemaha iyo hoos u dhamaadka asliga ah galay biyaha. Heerkulka biyaha waa inuu noqdaa + 22 ... +25 ° C. Kadib markaan xidideyno waxaan kuugu beddeleynaa baayacmushtarada ciidda. Daadi lakabka ugu sareeya ciid.
Rootiyada casriga ah ee cad ayaa muuqda marka ay la xiriiraan meesha ay ku xiran tahay godka rogan ee leh ciidda. Marka xididdadu gaadho dhererka 2-5 cm, godka waxaa lagu beeray weel yar, ka dib markii uu soo baxo sprouts cusub waa in loo wareejiyaa weel cusub. Habka taranka ayaa loo isticmaalaa wakhti kasta oo sanadka ah.
Guryaha waxtarka leh ee tsiperus
Tsiperus waa qiimo maaha oo keliya alaabada qurxinta. Waxa kale oo uu leeyahay tayada daaweynta. Mararka qaarkood ubaxa waxaa loo isticmaalaa daawada. Waxaa la ogaaday in warshadani ay hagaajinayso indho indhayn, waxay caawisaa hurdo la'aan, waxay ka yareeysaa madax-xanuun, waxayna leedahay saameyn faa'iido leh wareegga dhiigga. Intaa waxaa dheer, waa aaladda dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo ilaaliyaha guriga raaxada. Iyada oo ay uga mahadcelinayso nabadgelyadeeda iyo amnigeeda, dhirta badanaa waxay u adeegtaa qayb ka mid ah gudaha xannaanooyinka iyo dugsiyada.
Ma taqaanaa? Waxaa jira calaamad caan ah in tsiperus nuugo tamar taban, hagaajineysa xaaladda nafsaaniga ah waxayna ka hortagtaa niyad-jabka dadka.
Sidaa darteed, waxaad ka baratay wax kasta oo ku saabsan xeerarka iyo qaababka daryeesha ubaxyo gudaha ah oo leh caleemo yaab leh (sida feeraha dalladda). Iyadoo la raacayo talooyinka kor ku xusan, daryeelka xayiraadaha ee xaalada guriga ma shaqeyn doonto shaqo gaar ah.